Flim2MM: January 2017
အမေရိကန်ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ ဒရာမာဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Sully ဟာ အမေရိကန် လေကြောင်း လိုင်းမှ လေယာဉ်အမှတ် (၁၅၄၉) ကြုံခဲ့ရတဲ့ ၂၀၀၉ က အဖြစ်အ ပျက်နဲ့ လေယာဉ်မှူး ကပ္ပတိန် ချက်စလေစယ်လီဆယ်လန်ဘာ ဂျာရဲ့ အကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာပါ။
၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်က အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်အမှတ် (၁၅၄၉) ဟာ လေယာဉ်မှူး ကပ္ပတိန်ချက်စလေ စယ်လီဆယ်လန်ဘာဂျာနဲ့ အရာရှိဂျက်ဖ်စကီလက်စ်တို့ရဲ့ မောင်းနှင်မှုနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မြောက်ပိုင်းက လာဂါဒီယာလေဆိပ်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ ပျံတက်ပြီး သုံးမိနစ် လောက်အကြာမှာပဲ ပြသနာလာပါတော့တယ်။ လေယာဉ်ကြီးဟာ ကနေဒါ ငန်းအုပ်နဲ့တိုက်မိပြီး အင်ဂျင်နှစ် လုံးစလုံး အလုပ်မလုပ်တော့ပါ ဘူး။ အင်ဂျင်တွေက အလုပ် မလုပ်တော့သလို အရေးပေါ်ဆင်းသက်စရာ လေယာဉ်ကွင်းလည်း မရှိတဲ့အခြေအနေမှာ လေယာဉ်မှူးကြီး စယ်လီဟာ ရွေးစရာနည်း လမ်းမရှိတော့ဘဲ ဟက်ဒ်ဆန်မြစ် ထဲကို အရေးပေါ်ဆင်းသက်ဖို့ကို ပဲ ရွေးချယ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
လေယာဉ်ပေါ်မှာပါရှိတဲ့ ခရီးသည်နဲ့ လေယာဉ်ဝန်ထမ်း စုစု ပေါင်း ၁၅၅ ယောက် ဘေးမသီ ရန်မခစေဖို့အတွက် စယ်လီဟာ ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ လေယာဉ်ကြီး ကို မြစ်ထဲဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆူလီနဲ့ လက်ထာက်လေယာဉ်မှူး ဂျက်ဖ်တို့ဟာ လေယာဉ်ပေါ်ပါသူတွေအကုန်လုံးကို အသက်အန္တရာယ်ကင်းအောင် ဆင်းသက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ လေယာဉ်အမှတ် (၁၅၄၉)က လေယာဉ်မှူး ကပ္ပတိန်စယ်လီ နှင့်တကွ လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေ အကုန်လုံး သူရဲကောင်းဆုရခဲ့ကြ ပြီး ကပ္ပတိန်စယ်လီအဖို့တော့ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် မီဒီယာတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသလို ဝေဖန်ပြောကြားမှုတွေလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရာ ကို ဇာတ်အိမ်တည်ရိုက်ကူးထား တာမို့ အဲဒီအခြေအနေကြုံခဲ့ရစဉ် က အဖြစ်အပျက်တွေကို ကွက် ကွက်ကွင်းကွင်း သိမြင်ပြီး ပြေး မလွတ်တဲ့ အသက်ဘေး ကြုံရ တော့မယ့် ခံစားမှု၊ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်မှု၊ စိုးရိမ်မှု၊ ရာနဲ့ချီတဲ့ ခရီးသည်တွေရဲ့ အသက်ကို လက်ထဲရောက်နေချိန်မှာ လေယာဉ် ပေါ်မှာ တာဝန်အရှိဆုံးလူရဲ့ ဆုံးဖတ်ချက်နဲ့ တာဝန်ယူမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးလို့။
IMDB rating ကောင်းနေဆဲ မင်းသားကြီး Tom Hanks ဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Kyaw Zaya ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 36mins
[Translate By]:……………………..:[ Kyaw Zaya
Posted by Y Junction at 8:47:00 PM No comments:
Labels: Biography, Drama, Hollywood
Posted by Y Junction at 11:24:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 12:10:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 4:49:00 AM5comments:
ဒီနေ့တော့ ဇာတ်လမ်းအေးလေး တွေကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအကြိုခံစားဖို့အတွက် ဒရာမာ ဇာတ်ကားသစ်လေးအကြောင်း ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေမွန်ဟိုက်တာဝါမှာ အိုလီ ဗာဆိုတဲ့ (၁၀)နှစ်အရွယ် ညီငယ် တစ်ယောက်ရှိပြီး သူတို့အမေဟာ မူးယစ်ဆေးမှုနဲ့ ထောင်ကျနေတဲ့ အတွက် ရေမွန် က စောင့်ရှောက် နေခဲ့တာပါ။ သူတို့အဖေနဲ့ အမေ က ကွဲနေတာဖြစ်ပြီး ငဆိုးလေး အငယ်ကောင်ကို စောင့်ရှောက် ရင်း ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် အတူ နေကြတာပါ။
တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ အမေရှိတဲ့ ထောင်ကို ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် သွားတွေ့ခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာ လွတ်တော့မယ့် သူ့အမေက အငယ်လေး ကို ခေါ်ထားမယ့်အကြောင်း ရေမွန်ကို ပြောရင်း သားအမိနှစ်ယောက် အချေအ တင်တွေ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ရေမွန်တို့ ညီအစ်ကိုဟာ သိပ်မတည့်ပေမယ့်လည်း ညီဖြစ်သူ ကို သူ့အမေက အပြီးခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့လည်း မိသားစု စုစုစည်းစည်း ဖြစ်ချင်တဲ့ ရေ မွန်တစ် ယောက် လက်မခံချင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ ညီကို သူ့အမေခေါ်သွားမှာစိုးတဲ့ အတွက် အိုလီဗာကိုခေါ်ပြီး ညီ အစ်ကိုနှစ်ယောက်သား ကယ်လီ ဖိုးနီးယား ကမ်းရိုးတန်းဘက်ကို ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့အမေ ထောင်ကလွတ် တဲ့အချိန်မှာ သူတို့အဖေနဲ့အတူ အိမ်ကိုလာ ရှာပေမယ့် ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်စလုံး မရှိတာတွေ့ခဲ့ ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယား ကမ်းရိုးတန်း ဘက်ကို ထွက်သွားတယ်ဆိုတာ သိခဲ့တာကြောင့် အဖေနဲ့ အမေ လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ရေမွန်တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကတော့ စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့ သွား လာကြပြီး သူတို့မိဘတွေကလည်း သူတို့သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်သွားကြခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ညီအစ်ကိုရှိရာကို မိဘတွေ ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ညီလေးနဲ့ မခွဲချင်ဘဲ မိသား စုဘဝလေး ပြန်တည်ဆောက်ချင် တဲ့ ရေမွန်ရဲ့ စိတ်ကူးမျှော်လင့် ချက်တွေ ဖြစ်လာပါ့မလား၊ မိဘ တွေရောက်လာပြီး ဘာတွေဆက် ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြဦး နော်။
မိသားစုဇာတ်လမ်းအေးအေးတွေ သဘောကျတဲ့ ပရိသတ်အတွက်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ထား သူတွေက ရေမွန် အဖြစ် တေလာလော့တ်နာ၊ အိုလီဗာအဖြစ် နီကော့စ်ခရစ္စတိုနဲ့အတူ ကွန်စတန့်စ်ဇင်မာ၊ ကန်နီဂျွန်ဆင်၊ ဂျို အန်နာဘရဒ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
[FORMAT]:…………………………:) 720p DVDRip
[GENRE]:………………………… .:) Drama
[FILE SIZE]:……………………….:) 889 MB
[SUBTITLES]:……………………..:) မြန်မာ Hardsub
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 40mins
Posted by Y Junction at 12:09:00 AM No comments:
ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အညွှန်းရေးဖို့ အချက်အလက်လိုက်ရှာတော့ ထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့တယ်။ Online စွယ်စုံကျမ်းကြီးဖြစ်တဲ့ Wikipedia မှာ History of crime fiction အကြောင်းအရာအောက်မှာ ဒီ Hard Boiled (1992) Lat sau san taam ဇာတ်ကားကို ထည့်သွင်းပြောထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ Fiction ဇာတ်လမ်းဆိုပေမယ့် တကယ်လည်း ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ ထည့်သွင်းထားတာကြောင့် နမူနာပေးခံရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မူခင်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သတ်ရင် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ကားတွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှာ ဟောင်ကောင် ဒုစရိုက်သမိုင်းကို စိတ်ကူးဇာတ်လမ်းဖော်ထားတဲ့ နာမည်ကျော် ဒါရိုက်တာကြီး John Woo ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲ နဲ့ Asia-Pacific Film Festival မှာ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု ရရှိခဲ့တဲ့အပြင် ထုတ်လုပ်သူဆု လည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ပို့ဆု စကာတင်စာရင်းမှာလည်း Tony Leung Chiu Wai ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Rating အပိုင်းကလည်း မြင့်တဲ့ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Crime နဲ့ Drama ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တာနဲ့အညီ သရုပ်ဆောင်တိုင်းရဲ့အားထုတ်မှုကိုလည်း မြင်ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် Chow Yun Fat (ချောင်ရင်ဖတ် :P) ရဲ့ (သွားကြားထိုးတံလား၊ မီးခြစ်ဆံ ပါးစပ်မှာကိုက်ပြီး မထိတထိပြုံးတဲ့) စတိုင်က အခုထက်ထိ မျက်လုံးထဲစွဲနေပါတယ်။ မျက်ရည်ချူတဲ့ ကားကောင်းထဲမှာလည်းပါ ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မပြောတော့ဘူး။ ကြည့်ပြီးသားဆိုရင်လည်း ပြန်ကြည့်ဖို့သင့်တဲ့ကားတစ်ကားပါလို့ ပြောပါရစေ။ ဟုတ်ကဲ့....မြန်မာဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ စိုင်းလင်းမြတ် ဖြစ်ပါတယ်။
အညွှန်း - R!B
[FORMAT]:…………………………:) 720p HDRip
[GENRE]:………………………… .:) Action,Crime,Drama
[FILE SIZE]:……………………….:) 608 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 8mins
[iMDB RATING]:………………....:) 7.9/10
Posted by Y Junction at 6:12:00 AM2comments:
ဒီတစ်ကားကတော့ အချစ် နဲ့ လျို့ဝှက်နဲနက်ရှာဖွေတာကို ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်လျှော်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေရဲ့ခံစားမှုအတက်အကျတွေကို မြင်ရမှာပါ။ Htoo Htoo က ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်။
စာရေးဆရာ John Green ရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးသော နာမည်ကြီးဝတ္ထုကို အခြေခံပြီး အသက်သွင်းထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Quentin ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ Margo ဆိုတဲ့ ခပ်ချောချောကောင်မလေးကို တိတ်တခိုးကြိတ်ကြိုက် နေပါတယ်။ Quentin ဟာ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ နေထိုင်နေရသူဖြစ်ပေမယ့် Margo ကတော့ သူနှင့်မတူပါဘူး။ တစ်ညမှာ Margo ဟာ Quentin ကို သူ့ရဲ့ တစ်ညတာစွန်းစားခန်းကို ပါဝင်ဖို့လာခေါ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဘောင်တွေ ဟန်ဆောင်မှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကင်းတဲ့ တစ်ညတာကို Quentin ကို ပြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နေထိုင်နေတဲ့ မြို့ကြီးဟာ တကယ်တော့ Paper Towns စက္ကူချပ်တွေလိုပဲ ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေ ပြည့်နှက်နေတာ ဖြစ်ပေမယ့် ဖြူစင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုမှတ်ထားတဲ့ အသိဥာဏ်တွေကတော့ ပျောက်ပျက်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်း Quentin ကို ပြောကြားရင်း တစ်ညတာကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တနေ့စပြီး Margo တစ်ယောက် ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း သိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သူမကို Quentin တို့သူငယ်ချင်းတစ်စု ရှာဖွေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ စည်းကမ်းတွေကြားထဲမှာ နေနေရတဲ့ Quentin တစ်ယောက် ဘောင်တွေကိုကျော်ပြီး စွန့်စားခန်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက် Margo က Quentin တစ်ယောက်ထဲ နားလည်နိုင်မယ့် သဲလွန်စတွေကို ထားခဲ့ပါတယ်။ စွန့်စားခန်းတွေကို လွတ်လပ်စွာ ဖြတ်သန်းပြီး စစ်မှန်တဲ့ မိတ်ဆွေဘ၀၊ ချစ်ခြင်းတရားတွေနှင့် Margo ကို ရှာတွေ့နိုင်မလားဆိုတာ စောင့်မျှော်ခံစား ကြည့် ကြရအောင်လား။
အညွှန်း - http://www.allyouths.com
[FILE SIZE]:……………………….:[ 459 MB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 49mins
Posted by Y Junction at 8:45:00 AM No comments:
လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ဇာတ်ကားတကားဖြစ်တဲ့အလျောက် ရုပ်ရှင်ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတလက်ဖြစ်ပါတယ်။ Flim2mm မှ admin ဖြစ်တဲ့ R!B မှမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး HDrip version ကို တင်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ (Cam Version ကို ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က Flim2mm ကတင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။)
[FILE SIZE]:……………………….:[ 933 MB / 498 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 1280x536 / 640x280
Posted by Y Junction at 8:19:00 AM No comments:
မြန်မာလိုခေါင်းစဉ်တပ်ရရင်တော့ သမ္မတကြီးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းပေါ့။ ကိုရီးယားသမ္မတကြီးရဲ့ သမီးတက်တဲ့ကျောင်းမှာ စာသင်ရတဲ့ ဆရာမကို မုဆိုးဖိုကြီးသမ္မတက စိတ်ဝင်စားသွားပြီး နီးစပ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာကို ရယ်ရယ်မောမော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါ။
ကိုရီးယားကားတွေ ခေတ်စားကစ အချိန်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးပြီး ယခုအချိန်မှ Flim2mm Translator Group မှ ညီလေး Htoo Htoo Zaw မှ ရှားရှားပါးပါး ပြန်လည်ရှာဖွေပြီး ဘာသာပြန်ပေးခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတ်ကားဟာ Htoo Htoo Zaw အတွက် ဒုတိယမြောက် ဘာသာပြန်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ပထမကားကတော့ ကိုရီးရား အက်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Man on High Heels (2014) ဖြစ်ပါတယ်။
[FORMAT]:………………………….:[ 640p SD MP4
[FILE SIZE]:……………………….:[ 711 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 640 x 352
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 35mins
[Translate By]:……………………..:[ Htoo Htoo Zaw
Posted by Y Junction at 3:59:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 4:24:00 AM2comments:
Ben-Hur ရုပ်ရှင်ကားဟာ 1959 က ထွက်ခဲ့ပီးသား oscar 11 ဆုရ Ben-Hur ကားကို ပုံစံ အသွင်​အပြင်​ အနည်းငယ်ကွဲလွဲထားပြီးပြန်လည်အသက်သွင်းထားခြင်းပါ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဂျေရုဆလင်မြို့ကို ရောမတွေအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလမှာ ဂျူးလူမျိုး မင်းမျိုးမင်းနွယ် ဖြစ်တဲ့ Ben-Hur ဟာ Messala ဆိုတဲ့သူနဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါ။
Messala ရောမစစ်တပ်မှာ အကြီးအကဲဖြစ်လာချိန်မှာ Ben-Hur ကိုလည်း ညီအစ်ကိုအဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ကာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ Messala ဟာ အထင်လွဲပြီး Ben-Hur က သူ့ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တယ်လို့ ထင်ပြီး Ben-Hur ကို တစ်ဘဝလုံး ကျွန်အဖြစ် ပစ်ဒစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Ben-Hur ဟာ (၅)နှစ်လုံးလုံး ကျွန်ဘဝနဲ့နေလာပြီး သင်္ဘော ရေတပ်စစ်ပွဲမှာ Ben-Hur ဟာ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ သည်လိုနဲ့ Ben-Hur ကို အာရပ်သူဌေးတစ်ယောက်ဟာ ကယ်တင်ခဲ့ပြီး စစ်မြင်းရထားစီး အတတ်ပညာကို သင်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။Ben-Hur သူ့ကို ကျွန်ပြုခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို စစ်မြင်းရထားပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်လို ပညာပေးမလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် တွေ့မြင်ရမှာပါ။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိက မက်ဆေ့ခ်ျကတော့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းပါပဲ။ Jesus ရဲ့ နောက်ဆုံးကားတိုင်တက်ချိန်မှာ နာကျင်နေပေမယ့် လူတွေကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ ဘုရားသခင်ထံ အသာနားခံခဲ့တာကို Ben Hur မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး သူ့ရဲ့ နှလုံးသားမှာတွယ်ကပ်နေတဲ့ အမုန်းတွေဘယ်လို ပြေသွားမလဲဆိုတာကိုတော့.....
credeit - Movie Crazy - DVB
[FILE SIZE]:……………………….:[ 869 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 720 x 370
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 2h 05mins
Posted by Y Junction at 4:51:00 AM No comments:
ဂျက်ကီချန်းကားတွေကိုဆက်တိုက်ဘာသာပြန်လာသူ မောင်ဦး ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်ဘာသာပြန်တဲ့ ဇာတ်ကားကလည်း ဂျက်ကီချမ်းရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ကား Wheels on Meals ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်အကြီးအသေး နှစ်ခုတင်ထားပေးပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Jackie Chanရဲ့ Wheels on mealsဇာတ်ကားလေးကလည်း Golden Harvestရုပ်ရှင်Productionကနေ၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ ထုတ်ခဲ့တဲ့ Jackie Chanရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်လက်ပါပဲ Project Aနဲ့ အတူအောင်မြင်လာတဲ့ ဂျက်ကီချန်းရဲ့ နောက်ထပ် ဖန်တီးမှုတစ်ခုပါ
ဒီကားမှာ သူနဲ့အတူတူ ပီကင်းအော်ပရာ အကယ်ဒမီကျောင်းကနေတစ်ကျောင်းတည်းထွက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Yuen biao(ဘောလုံးမင်းသား)နဲ့ Summo Hung(ဝတုတ်မင်းသား)တို့ပါ သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ် သူတို့က ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူတူလက်တွဲခဲ့ကြတာပါ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ
Thomas(ဂျက်ကီချန်း)နဲ့ David(ဘောလုံးမင်းသား)က ညီအစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲတွေပါ သူတို့က ဈေးကွက်လပ်လေးတစ်ခုမှာ အစားအသောက်တွေရောင်းပြီးတော့ သာမန်စီးပွားရေးလေး လုပ်နေကြပါတယ် Davidကချက်ပြုတ်ကြော်လှော်တဲ့သူ၊ Thomasကတော့ စကိတ်ဘုတ်လေးနဲ့ လိုက်ပြီး ပို့ရတဲ့သူပေါ့။
Davidရဲ့အဖေကတော့ စိတ်မနှံ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ သူ့အဖေရဲ့ အချစ်သစ်ကတော့ Sylviaရဲ့အမေပါ
သူတို့ရောင်းချနေတဲ့နေရာမှာ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျနေတဲ့ လူမိုက်တစ်စုကိုလည်း သည်းမခံနိုင်လို့ ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
Moby(ဝတုတ်မင်းသား)ဆိုတဲ့ ပေါကြောင်ကြောင်နဲ့ ကိုးရိုးကားရားနိုင်တဲ့ အလွတ်စုံထောက်တစ်ယောက်ကတော့ Gloriaကို ရှာဖွေဖို့ တာဝန်အပ်နှံခံခဲ့ရပါတယ်။ Gloriaရဲ့သမီးလေးက Sylviaပါ Sylviaက ငယ်ငယ်ကတည်းက လမ်းမပေါ်မှာကြီးပြင်းလာလို့ ခါးပိုက်နှိုက်ဘဝနဲ့ ဝမ်းရေးကို ဖြေရှင်းနေရသူလေးပါ Sylviaလေး ဒုက္ခရောက်နေတာကို Thomasတို့က ဝင်ရောက်ကူညီရင်းနဲ့ Thomasတို့ညီအစ်ကိုတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။Davidက Sylviaကို မြင်မြင်ချင်း နှစ်သက်ချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ် Sylviaက ငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေကို အမွေဆက်ခံမဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ သိလိုက်ရချိန်မှာ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်း ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ် Thomas, Davidနဲ့ Mobyတို့က လူဆိုးတွေလက်ထဲကနေ Slyviaကို ဘယ်လို ပြန်လည်ကယ်တင်ကြလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ရှုခံစားကြပါ .............
(Fightတင်ခန်းတွေက ရှယ်တွေချည်းပါပဲ ဘာအကူအညီမှမပါဘဲ လူချည်းအနာခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ )
Golden Harvestကအစဦးတုန်းကဒီဇာတ်ကားကို" Meals on Wheels"လို့ပေးပြီးမှ
သူတို့ရဲ့ဒီဇာတ်ကားမတိုင်ခင် ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ကားတွေကတော့"Megaforce"နဲ့ "Menage A Trios" ဇာတ်ကားနှစ်ကားက"M"နဲ့ချည်း စနေတာကြောင့် Wheels On Meals"ပြန်လည်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာပါ။
Wheel on meals ဇာတ်ကားရဲ့ဟောင်ကောင်မှာ ရုံတင်ပြသလို့ရတဲ့ အမြတ်ငွေကတော့ HK $21,465,013 ပါ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - မောင်ဦး
[FORMAT]:………………………….:[ 720p HD MP4
[GENRE]:………………………… .:[ Comedy, Crime, Action
[FILE SIZE]:……………………….:[ Large- 836 MB , Small- 445 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 720 x 390 , 640 x350
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 40mins
[Translate By]:……………………..:[ မောင်ဦး
pcloud Large File
pcloud Small File
Posted by Y Junction at 4:32:00 AM2comments:
စစ်ကားကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် 2016 ထွက်တဲ့ စစ်ကားကောင်းကောင်းလေး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ အချိန်ကာလအားဖြင့် ဒုတိယ ကမာစစ်ပြီးကာနီးအချိန်ဖြစ်ပြီး အမေရီကန် ဗြိတိန် အထူးတပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ နာဇီပါတီဝင်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ မဟာမိတ် သူလျှိုကို ရန်သူနယ်မြေအတွင်းပိုင်းထိသွားပြီ ခေါ်ထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးကို စီစဉ်ထားပေမယ့်လည်း အစကတည်းက သူတို့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ် အပစ်ခံရပြီး အရေးပေါ် မြေပြင်ကို ခုန်ချခဲ့ရပါတော့တယ်.... အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေမှုနဲ့စခဲ့ပြီး စစ်ဆင်ရေးကို ဘယ်လိုဆက်လက် အောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့.....
[GENRE]:………………………… .:[ Action, History, War
[FILE SIZE]:……………………….:[ 760 MB
Posted by Y Junction at 12:49:00 AM2comments:
Labels: Action, History, Hollywood, War
Flim2mm Translator Group မှ စိုင်းလင်းမြတ်ရဲ့ ပထမဆုံးလက်ရာဖြစ်ပါတယ်။
The Tower ဇာတ်ကားဟာ အက်ရှင်ကားကောင်းတကားဖြစ်ပြီး သိုင်းချတာ၊ သတ်ပုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ ခရစ်စမတ်အကြိုညတုန်းက မိုးမျှော်တိုက်ကြီးမီးလောင်မှုမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ လူတစု အသက်ဘေးလွတ်အောင် ပြေးရတဲ့စွန့်စားခန်းမျိုးပါ။ ကယ်ဆယ်ရေးမီးသတ်သမားတွေရဲ့ စွန့်စားမှုနဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက ကပ္ပတိန် ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်စိတ်ဓါတ်တို့ကလည်း ကြက်သီးထစရာပါပဲ။ အန္ဒရာယ်တွေကြားထဲမှာမှ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဟာသခန်းတွေဟာလည်း သဘောကျစရာပါပဲ။ ကိုရီးယားကားတို့ရဲ့ထုံးစံ အလှပဆုံးပုံစံဖြစ်တဲ့ Drama အချိုးပိုင်းဟာလည်း သင့်ရဲ့မျက်ရည်ကိုချူပစ်လိုက်ဦးမှာပါ။
ကဲ translator စိုင်းလင်းမြတ် သေသေသပ်သပ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ The Tower ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို ဒေါင်းယူခံစား ကြည့်ရှုကြပါကုန်။
[FORMAT]:………………………….:[ 1280p BrRip x264 MP4
[GENRE]:………………………… .:[ Action, Comedy, Drama
[FILE SIZE]:……………………….:[ 755 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 1280 x 542
Posted by Y Junction at 8:37:00 PM No comments:
Labels: Action, Comedy, Drama, Korea
ကဲ ဘောလီးဝုဒ် အချစ်ကားလေးပေါ့နော်၊
မင်းသားမင်းသမီးတွေကတော့ နာမည်ကြီးတွေပါပဲ၊ အချစ်စစ်ကို ရှာဖွေခြင်းလို့ မြန်မာလိုပေးရင်ကောင်းမလားပဲ၊ အဓိက ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ အတိတ်ဆိုးတွေ၊ အချစ်တွေ၊ အသည်းကွဲတာတွေ နဲ့ လျှောက်လှမ်းရတဲ ဘဝခရီးလမ်း အကြောင်းပါ။ အချစ်တခု ပေါက်ဖွားလာခြင်းဟာ ရင်ဖိုစရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသလို တခါတခါမှာ ကြောက်စရာ ကောင်းနေမှာပါလို့တော့ ညွှန်းပါရစေ။
[RESOLUTION]:………………….:[ 720 x 360
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 2h 38mins
Posted by Y Junction at 1:40:00 AM No comments:
Labels: Bollywood, Drama, Music, Romance